Himalaya Dainik » न’सालु पदार्थ खाएर महिलालाई च्या’प्प समातेको होइनः नेकपाका नेता पराजुली
काठमाडौं । सुशील कोइराला प्राधनमन्त्री भएका बेला तत्कालीन एमालेको तर्फबाट हरि पराजुली कृषि मन्त्री थिए । मन्त्री भएका बेला असार १५ गते धान दिवसका अवसरमा एक महिलालाई ज बर ज स्ती समातेपछि विवादमा आएका थिए । धेरै आलोचना भएपछि पराजुलीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । पाँच वर्ष अगाडिको यो घटना असार १५ गतेका दिन सधै सामाजिक सञ्जालमा त्यस बेलाको भिडियो भाइरल हुने गरेको छ । हरि पराजुलीसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
पाँच वर्ष अगाडि मन्त्री भएका बेला एक जना महिलालाई दु’र्व्युवहार गरेको सहि हो ?
त्यो कुरा गलत हो । ती आमाले आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो त्यो भिडियो बनाउने पत्रकार मेरासामु आएर भन्नु पर्‍यो भन्नुभयो । यसरी मान्छेको चरित्र ह त्या गर्न पाइन्छ रु भनेर पनि भन्नुभयो ।
त्यस बेलाको वास्तविकता के हो रु धान दिवसको दिन तपाईको लागि कालोदिन हो नि रु असार १५ गतेको का ण्डले तपाईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो नि ?
तपाईले महिलालाई च्या प्प समात्नु भयो नि ?
कुनै दु’व्र्यव’हार होइन । समातेकै होइन । उहाँले आशीर्वाद दिन्छु भन्नुभयो । ल आशीर्वाद दिनुस् आमा भनेको हो । क्यामरामेनले आफ्नो करामत देखाएको हो ।
हरि पराजुलीले ह’र्कत गरे भने समाचार बाहिर आयो ?
मिडियाहरूले गरे । मन्त्री भएको बेलामा मिडियामेनहरूका धेरै चाहनाहरू हुन्छन् । उनीहरूका चाहना मन्त्रीहरूले पूरा गर्न सक्दैनन् । कति लिगल हुन्छन् । कति इ’ल्लि’गल हुन्छन् । विज्ञापनका नाममा । कहिले केका नाममा ।
हिलो खेल्दा पनि महिलातिर दुष्टि जानुपर्छ र भन्यो रु पुरुषसँग खेलेको भए हुने थिएन र ?
त्यसभन्दा पहिला महिला दिदीबहिनीहरूले खेतमा हिलो छ्यापा छ्याप गरेर मलाई ल’डा’उनुभयो । त्यो दृष्य देखाइएन । जब म नहुउन भनेर आइरहेका बेला एकजना आमाले मन्त्री हेर्न आएको, खै मन्त्री कता गए भनेपछि मैले नै मलाई बाँदर जस्तो बनाएका छन् भनेर आशीर्वाद दिनुस् भनेर म निहुरिएको अनि त्यही निहुरिएको कुरालाई लिएर अ’भद्र ग¥यो भनेर भनियो । अरु केही पनि होइन ।
निहुरिँदा के गर्नुभयो तपाईले ? तपाईको टाउको कहाँ गएर ठो’कियो ?
निहुरिँदा केही पनि गरेको होइन । ल आमा आशीर्वाद दिनुस् भनेको हो । मेरो टाउको ठ/क्कि’एको होइन । तपाईको क्यामराले गरेको हो । महिलामाथि मेरो कुनै गलत नियत छैन ।
त्यो दिन तपाईले कुनै न’शा’लु प’दार्थ खाएर जानु भएको थियो ? असार १५ गते आउनेवित्तिकै हरि पराजुलीको नाम जोडिन्छ नि ?
विवाद त मिडियाले गरेको हो नि । विवाद हामीले गरेको होइन । हरिबोल गजुरेलले गमलामा धान रोप्नु भयो । के बिगार्नुभयो ? मिडियाले गजुरेलको पनि खिल्ली उडाउनुभयो । मिडियालाई के प्राप्त हुँदैन अनि एउटा मन्त्रीको पछाडि लाग्छन् ।
कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले महिलालाई अ’पमान ग¥यो भनेर मिडियाले राजीनामा दिने गराए । जसले मिडियावालाहरूलाई घाँस हाल्दैन त्यसलाई ल’खेुट्न थाल्छन् । धेरै पत्रकारले पत्रकारको कार्ड देखाएर काठमाडौंमा घर बनाएर बस्ने धेरै छन् । नेपालका कुनै पनि मिडिया हाउस स्वतन्त्र छैनन् ।
पत्रकारले कुरा उठाउँदा सम्वेदनशील विषयबाट उठाउँछन् । लैङ्गिक हिँ’साको विषय हो । यस्ता विषय उछाल्दिउँ कि जसमा कसैले पैरवी गर्न सक्दैन । पैरवी गर्न सकेन भने राजीनामा दिने ।
प्रकाशित मिति १९ असार २०७७, शुक्रबार १२:१६
ठक्करबाट युवकको मृत्यु, स्थानीयले जलाए ट्यांकर
सुदुपश्चिममा भयावह बन्दै कोरोना, आज थपिए ३९ संक्रमित